Ukuguquka kwesimo sezulu kuletha intwasahlobo phambili yezinkonjane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyathinta ukuvumelanisa kwezinhlobo eziningi zezinto eziphilayo. Ngenxa yezinguquko emazingeni okushisa aphakathi komhlaba, izinhlobo eziningi ezifudukayo zishintsha imizila nezigqi zazo.
Lokhu kwenzeka esimweni senkonjane ejwayelekile, efika isikhathi ngasinye ekuqaleni kwentwasahlobo eNhlonhlweni Yase-Iberia. Njengoba imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu inyuka futhi amazinga okushisa omhlaba anda, izinkonjane zifika ngaphambi kwesikhathi eSpain emzileni wazo wokufuduka.
1 Amarekhodi eBarn Swallow
2 Ubudlelwano phakathi kwesimo sezulu nezinyoni
3 Intwasahlobo iza masinyane ezinyonini
Amarekhodi eBarn Swallow
Kusukela maphakathi nekhulu leminyaka elidlule, kuye kwaqhamuka umkhuba owandayo kwizinkonjane. Futhi isikhathi ngasinye lapho befika ngaphambi kwesikhathi eSpain entwasahlobo, ngesikhathi somzila wabo wokufuduka. Bafikile eSpain kuze kube yinyanga kunalokho abakwenza, noma ukuthi benzeni.
Kubalulekile ukuthola imininingwane yemisebenzi yesigubhu ukuze ufinyelele eziphethweni. Uhlelo lwe-SEO / BirdLife's Birds and Climate Program Baphethe ukuqoqa idatha yokufika yaminyaka yonke yezinkonjane eminyakeni edlule, ukuze kamuva bakwazi ukuziqhathanisa futhi bakhiqize lowo mkhuba. Lo msebenzi uqukethe ukubhala phansi izinsuku zokuqala lapho kwenzeka khona izinto ezahlukahlukene ze-phenological, njengokufuduka kwezinyoni, ukuqhakaza kwezihlahla ze-alimondi, ukuqala kokukhiqiza kabusha noma ukuvela kwezinambuzane zokuqala. Lezi ngezinye zezinto ezimele ukuqala kwentwasahlobo.
Izinhlobo zezinyoni ezifudukayo ziwela iStrait of Gibraltar lapho zibona izimo ezithandekayo
Wonke lo msebenzi kungenzeka kuphela uma izakhamizi ezivela kuwo wonke amagumbi ezwe zisebenzisana ngokuqaphela lo msebenzi noma ngokunikeza imininingwane ngezinkonjane. Kusukela ekuqaleni kwalo msebenzi, amavolontiya angaphezu kwenkulungwane anikele amarekhodi angaphezu kwe-100.000 ngomsebenzi wenkonjane.
UBlas Molina isebenza endaweni yokuqapha i-SEO / BirdLife futhi ichaze ukuthi:
“Ukuvela kwenkonjane yokuqala edolobheni lethu noma edolobheni, usuku lapho unogolantethe abuyela khona esidlekeni sawo, ukubonwa kwezingodo zokuqala ezihlobisa isibhakabhaka sasemadolobheni noma ukuzwa kokuqala kwengoma ye-nightingale ezihlahleni nasemabhange omfula, ngezinye amarekhodi enziwa ngalezi zinsuku. Kodwa ukubaluleka kwayo kulele ekuhambeni kwesikhathi, okuyindlela okungahlolwa ngayo ukwehluka kwamaphethini wokufuduka kwezinye izinhlobo noma ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuyazithinta yini "
Ubudlelwano phakathi kwesimo sezulu nezinyoni
Kuyabonakala ukuthi Isimo sezulu siyisici esinqumayo sokufuduka nokuziphatha kwezinyoni. Izimo zezulu yilezo ezinquma ukufika nokuhamba kwezinyoni, ukubambezeleka noma ukuqhubeka kokuqhakaza noma ukubila kwezinambuzane. Maqondana nokufuduka kwezinyoni, kubaluleke kakhulu ukubheka izimo zesimo sezulu ezikhona endaweni yokudlula kwezinyoni, njengeStrait of Gibraltar.
Kukuleli qophelo lapho imimoya yasempumalanga ingaveza khona ukubambezeleka okukhulu ekufikeni kwezinhlobo ezifudukayo uma zivunguza ngamandla. Izinkonjane bakhetha ukulinda ukuwela umgwaqo uma bebona ukuthi izimo azithandeki kangako. Lesi simo lapho izinkonjane zikhetha ukulinda isimo sithuthuke khona kusukela ngesonto eledlule, lapho isiphepho esinemvula nomoya oLwandle i-Alboran sidale ukuthi izinkonjane ziqoqane ogwini lwase-Afrika zisalindile ukuthi isimo siyathuthuka.
Intwasahlobo iza masinyane ezinyonini
Kuleli qophelo lonyaka, ukuqhakaza kwezihlahla ze-alimondi sekuvele kubhalisiwe eningizimu nasenkabeni enkulu yenhlonhlo, okuletha ukufika kwezinyoni zokuqala ezifudukayo, ezifana nenkonjane ejwayelekile, indiza ejwayelekile, i-criallum yaseYurophu noma ikhayithi elimnyama, eliqala ukunwetshwa liye ngasenyakatho, kuyilapho abanye beshiya iNhlonhlo Yase-Iberia elibangise ezindaweni eziningi ezisenyakatho, njenge-crane ejwayelekile noma ihansi elivamile.
Ezindaweni ezisemadolobheni, ezinye izinhlobo ziqala umsebenzi wazo wokuzala, ziqala ukwakhiwa kwezidleke, ukuthandana kwezinhlobo ezifana nenyoni emnyama, njll. Ukuguquka kwesimo sezulu kubangela ukuthi izinhlobo zezilwane zishintshe "amashejuli" abo nemisebenzi yabo. Ngaphezu kwalokho, le misebenzi ye-phenological ithuthuke kakhulu emadolobheni kunemvelo ngoba isebenza njengeziqhingi ezishisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuletha intwasahlobo phambili yezinkonjane